သင့်ကလေးကို သဘာဝအတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုင်ရန် အကြံပြုချက်များ - Lifestyle Myanmar
Home Family သင့်ကလေးကို သဘာဝအတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုင်ရန် အကြံပြုချက်များ
သင့်ကလေးကို သဘာဝအတိုင်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနိုင်ရန် အကြံပြုချက်များ
အင်္ဂလိပ်စာကို အိမ်မှာနေရင်း သဘာဝအတိုင်း လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်အင်္ဂလ်ိပ်စာက သိပ်အကောင်းကြီး မဟုတ်ရင်တောင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သဒ္ဒါကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှ ကျောင်းမှာ သင်ယူပေါ့။ မိဘတွေအနေနဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံး လုပ်ပေးရမှာကတော့ မိမိတုိ့ရဲ့ ကလေးကို ဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့မှုများများရှိအောင် လုပ်ပေးပြီး သူတို့ကို စိတ်အားထက်သန်မှု ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြံပြုချက်တွေကတော့ သင့်ကလေးကို အင်္ဂလိပ်စကား ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီး ပြောတတ်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပေးလိုက်ပါ။ သူတို့အချိန်ကျလာရင် တဖြည်းဖြည်း ပြောတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် သတ်မှတ်ထားပါ။
ကလေးတွေဆိုတာ အကျင့်အတိုင်း လုပ်တတ်တဲ့ သူတွေပါ။ သူတုိ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကြိုသိထားရင် သူတို့်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်အပေါ် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး ယုံကြည်မှုလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေကို နေ့စဉ်ပုံမှန် အချိန်တွေမှာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပေးပါ။ ကျောင်းပြီးလို့ ပြန်လာရင် အင်္ဂလိပ်စာဂိမ်းကစားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ညအိပ်ရာမဝင်ခင် အင်္ဂလ်ိပ်ပုံပြင်စာအုပ်ဖတ်တာမျိုး ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။ ထပ်ခါထပ်ခါပြန်လုပ်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စကားကို အားထုတ်ပြောဆိုခြင်း မပြုနိုင်ခင်မှာ စကားလုံးတွေ၊ စကားပြောပုံစံတွေကို အကြိမ်များစွာ ကြားထားဖို့ အရင်လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နေ့စဉ်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက် အကြာကြီးလုပ်ရပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေကို လုပ်ခိုင်းတာထက် အချိန်အနည်းငယ်ယူပြီး မကြာခဏလုပ်ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုးကို လုပ်ဆောင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ငယ်လွန်းတဲ့ခလေးတွေအတွက်ကတော့ ၁၅ မိနစ်စာလောက်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ကလေးအရွယ်ရောက်လာပြီး သူတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ပိုများလာတာနဲ့အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ကိုလည်း တဖြည်းဖြည်းချင်းစီ တိုးသွားပါ။
၂။ အပြန်အလှန် လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်ပါစေ။
ကလေးတေးကဗျာ၊ အလင်္ကင်္ာတွေနဲ့ ကလေးစာအုပ်တွေဟာ အသက်ကြီးသွားတဲ့အထိ စိတ်ထဲမှာ စွဲမှတ်ပြီး ပါသွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါတွေဟာ ဖတ်ရင်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေပါ တွဲလုပ်ရတဲ့ဟာတွေမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတေးကဗျာတွေဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဟန်ပန်နဲ့ စကားလုံးတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး သီချင်းတွေကို အသက်သွင်းကာ သရုပ်ဆောင်ရပြီး၊ ကလေးစာအုပ်တွေဟာလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံလှလှလေးတွေ၊ တောက်ပတဲ့ ရောင်စုံချယ်သမှုတွေနဲ့ အသက်ဝင်လှပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီး အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရတဲ့ အရာမျိုးတွေကို ကလေးတွေရဲ့ အကြားစွမ်းရည်၊ စာဖတ်စွမ်းရည်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့ အားစိုက်ပါ။ သတိပြုရန်မှာ – ကလေးတွေဟာ ပျော်ရွှင်နေပြီဆိုရင် သဘာဝအတိုင်း အလွယ်တကူ သင်ယူ တတ်မြောက်သွားကြတယ် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သဒ္ဒါကို နောက်ပိုင်းမှာ သင်ပေးပါ။
ကိုယ့်ကလေးတွေကို သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အတိအကျလိုက်သင်ပေးနေစရာ မလိုပါဘူး။ ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အတူတူလုပ်ရင်း သင့်ကလေးက မကြာခဏပြောစကားတွေကို ကြားရင်း၊ သဒ္ဒါတည်ဆောက်ပုံတွေကိုပါ မသိမသာတတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒါက သင့်ကလေး ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စကားကို သဘာဝကျကျနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
၄။ နေ့စဉ်သုံးစကားပြော အခြေအနေတွေကို အသုံးပြုပါ။
အင်္ဂလိပ်စာကို အိမ်မှာဘဲ သင်ပေးရတာရဲ့ အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ကတော့ နေ့စဉ်အိမ်မှာ ပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့ စကားပြောအခြေအနေတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အိမ်တွင်းရှိ တစ်ကယ့်အရာဝတ္ထုများကို အသုံးချကာ ဘာသာစကားကို သဘာဝကျကျနဲ့ တစ်ကယ့်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အခြေအနေမှာ အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အဝတ်အစား လဲပေးရင်း၊ ဝတ်ပေးရင်းနဲ့ (ဒါမှမဟုတ်အဝတ်လျှော်ဖို့ ပြင်ဆင်ရင်း) လုပ်လို့ရပါတယ်။ (ဥပမာ – “Let’s put on your blue socks.” အပြာရောင်ခြေအိပ်လေး ဝတ်လိုက်ရအောင်၊ “It’ Dad’s T-shirt.” ဒါဖေဖေ့တီရှပ် စသည်ဖြင့်ပေါ့။) ကလေးတွေရဲ့ အိပ်ခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့လည်း ကလေးတွေအတွက် အရုပ်တွေ၊ ပရိဘောဂတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ- “Let’s put your teddy bear on the bed.” သား/သမီးရဲ့ ဝက်ဝံရုပ်လေးကို အိပ်ယာမှာတင်ထားရအောင်။ “Can you see your blue car? ကားအပြာလေးကို တွေ့လား။) စူပါးမားကက်ကိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဈေးဝယ်စာရင်းထဲက ပစ္စည်းအမည်တွေကို ကလေးကိုဖတ်ပြီး လိုက်ရှာခိုင်းတာမျိုး လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။
မိဘတစ်ဦးအနေနဲ့ သင့်ကလေးကို အားပေးမှုတွေ၊ ချီးမွမ်းမှုတွေ အမြောက်အများလုပ်ပေးရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ လုပ်သမျှသင်ခန်းစာ၊ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်ဆီက ဘာသာစကားအတွက် အားတက်သရော စိတ်ပါဝင်စားမှုကို သင့်ကလေးက အတုယူပြီး အတတ်သင်မှာမို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အလုပ်မဆို အချိန်ဆွဲရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း
အင်ျဂလိပျစာကို အိမျမှာနရေငျး သဘာဝအတိုငျး လလေ့ာလို့ရတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား။
ဟုတျပါတယျ။ သငျ့အင်ျဂလိပျစာက သိပျအကောငျးကွီး မဟုတျရငျတောငျ ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ သဒ်ဒါကိုတော့ နောကျပိုငျးမှ ကြောငျးမှာ သငျယူပေါ့။ မိဘတှအေနနေဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးကွီးဆုံး လုပျပေးရမှာကတော့ မိမိတုိ့ရဲ့ ကလေးကို ဘာသာစကားနဲ့ ထိတှမှေု့မြားမြားရှိအောငျ လုပျပေးပွီး သူတို့ကို စိတျအားထကျသနျမှု ဖွဈပျေါလာအောငျ လုပျဖို့ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွံပွုခကျြတှကေတော့ သငျ့ကလေးကို အင်ျဂလိပျစကား ခကျြခငျြးလကျငငျးကွီး ပွောတတျအောငျ မလုပျပေးနိုငျပါဘူး။ စိတျရှညျရှညျထားပေးလိုကျပါ။ သူတို့အခြိနျကလြာရငျ တဖွညျးဖွညျး ပွောတတျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁။ ပုံမှနျလုပျရိုးလုပျစဉျ သတျမှတျထားပါ။
ကလေးတှဆေိုတာ အကငျြ့အတိုငျး လုပျတတျတဲ့ သူတှပေါ။ သူတုိ့ဘာလုပျရမယျဆိုတာ ကွိုသိထားရငျ သူတိျု့လုပျရတဲ့ အလုပျအပျေါ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈပွီး ယုံကွညျမှုလညျး ရှိကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့လုပျဆောငျရမယျ့ အရာတှကေို နစေ့ဉျပုံမှနျ အခြိနျတှမှောလုပျဖို့ အစီအစဉျဆှဲပေးပါ။ ကြောငျးပွီးလို့ ပွနျလာရငျ အင်ျဂလိပျစာဂိမျးကစားတာမြိုး ဒါမှမဟုတျ ညအိပျရာမဝငျခငျ အင်ျဂလိပျပုံပွငျစာအုပျဖတျတာမြိုး ပုံမှနျလုပျပေးပါ။ ထပျခါထပျခါပွနျလုပျဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။ ကလေးတှဟော သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျစကားကို အားထုတျပွောဆိုခွငျး မပွုနိုငျခငျမှာ စကားလုံးတှေ၊ စကားပွောပုံစံတှကေို အကွိမျမြားစှာ ကွားထားဖို့ အရငျလိုအပျပါတယျ။
သငျ့ကလေးရဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို နစေ့ဉျထိနျးထားနိုငျဖို့အတှကျ အကွာကွီးလုပျရပွီး ပုံမှနျမဟုတျတာတှကေို လုပျခိုငျးတာထကျ အခြိနျအနညျးငယျယူပွီး မကွာခဏလုပျရတဲ့ လှုပျရှားမှုမြိုးကို လုပျဆောငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ငယျလှနျးတဲ့ခလေးတှအေတှကျကတော့ ၁၅ မိနဈစာလောကျဆိုရငျ လုံလောကျပါတယျ။ ကလေးအရှယျရောကျလာပွီး သူတို့ရဲ့ အာရုံစိုကျမှု ပိုမြားလာတာနဲ့အမြှ လကေ့ငျြ့ခနျးအခြိနျကိုလညျး တဖွညျးဖွညျးခငျြးစီ တိုးသှားပါ။
၂။ အပွနျအလှနျ လုပျရတာမြိုးဖွဈပါစေ။
ကလေးတေးကဗြာ၊ အလင်ျင်္ကာတှနေဲ့ ကလေးစာအုပျတှဟော အသကျကွီးသှားတဲ့အထိ စိတျထဲမှာ စှဲမှတျပွီး ပါသှားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါတှဟော ဖတျရငျးနဲ့ လှုပျရှားမှုတှပေါ တှဲလုပျရတဲ့ဟာတှမေို့ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးတေးကဗြာတှဟော ကိုယျလကျလှုပျရှားဟနျပနျနဲ့ စကားလုံးတှကေို ပေါငျးစပျပွီး သီခငျြးတှကေို အသကျသှငျးကာ သရုပျဆောငျရပွီး၊ ကလေးစာအုပျတှဟောလညျး စိတျဝငျစားဖှယျ ပုံလှလှလေးတှေ၊ တောကျပတဲ့ ရောငျစုံခယျြသမှုတှနေဲ့ အသကျဝငျလှပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီလိုမြိုးလိုကျပွီး အပွနျအလှနျလှုပျရှားမှုလုပျရတဲ့ အရာမြိုးတှကေို ကလေးတှရေဲ့ အကွားစှမျးရညျ၊ စာဖတျစှမျးရညျကို ဖှံ့ဖွိုးစတေဲ့ လှုပျရှားမှုလကေ့ငျြ့ခနျးတှမှော ထညျ့သှငျးအသုံးပွုဖို့ အားစိုကျပါ။ သတိပွုရနျမှာ – ကလေးတှဟော ပြျောရှငျနပွေီဆိုရငျ သဘာဝအတိုငျး အလှယျတကူ သငျယူ တတျမွောကျသှားကွတယျ ဆိုတာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ သဒ်ဒါကို နောကျပိုငျးမှာ သငျပေးပါ။
ကိုယျ့ကလေးတှကေို သဒ်ဒါစညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ အတိအကလြိုကျသငျပေးနစေရာ မလိုပါဘူး။ ပြျောစရာလှုပျရှားမှုတှကေို အတူတူလုပျရငျး သငျ့ကလေးက မကွာခဏပွောစကားတှကေို ကွားရငျး၊ သဒ်ဒါတညျဆောကျပုံတှကေိုပါ မသိမသာတတျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒါက သငျ့ကလေး ကွီးပွငျးလာတဲ့အခါ အင်ျဂလိပျစကားကို သဘာဝကကြနြဲ့ မှနျမှနျကနျကနျသုံးတတျဖို့ ကူညီပါလိမျ့မယျ။
၄။ နစေ့ဉျသုံးစကားပွော အခွအေနတှေကေို အသုံးပွုပါ။
အင်ျဂလိပျစာကို အိမျမှာဘဲ သငျပေးရတာရဲ့ အကောငျးဆုံးအကွောငျးပွခကျြကတော့ နစေ့ဉျအိမျမှာ ပွောဆိုသုံးနှုနျးတဲ့ စကားပွောအခွအေနတှေကေို အသုံးပွုနိုငျပွီး အိမျတှငျးရှိ တဈကယျ့အရာဝတ်ထုမြားကို အသုံးခကြာ ဘာသာစကားကို သဘာဝကကြနြဲ့ တဈကယျ့လကျတှဆေ့နျတဲ့ အခွအေနမှော အသုံးခနြိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးတှကေို အဝတျအစား လဲပေးရငျး၊ ဝတျပေးရငျးနဲ့ (ဒါမှမဟုတျအဝတျလြှျောဖို့ ပွငျဆငျရငျး) လုပျလို့ရပါတယျ။ (ဥပမာ – “Let’s put on your blue socks.” အပွာရောငျခွအေိပျလေး ဝတျလိုကျရအောငျ၊ “It’ Dad’s T-shirt.” ဒါဖဖေတေီ့ရှပျ စသညျဖွငျ့ပေါ့။) ကလေးတှရေဲ့ အိပျခနျးကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျရငျးနဲ့လညျး ကလေးတှအေတှကျ အရုပျတှေ၊ ပရိဘောဂတှနေဲ့ ဆိုငျတဲ့စကားလုံးတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးနိုငျပါတယျ။ (ဥပမာ- “Let’s put your teddy bear on the bed.” သား/သမီးရဲ့ ဝကျဝံရုပျလေးကို အိပျယာမှာတငျထားရအောငျ။ “Can you see your blue car? ကားအပွာလေးကို တှလေ့ား။) စူပါးမားကကျကိုသှားတဲ့အခါမြိုးမှာလညျး ဈေးဝယျစာရငျးထဲက ပစ်စညျးအမညျတှကေို ကလေးကိုဖတျပွီး လိုကျရှာခိုငျးတာမြိုး လုပျခိုငျးလို့ရပါတယျ။
မိဘတဈဦးအနနေဲ့ သငျ့ကလေးကို အားပေးမှုတှေ၊ ခြီးမှမျးမှုတှေ အမွောကျအမြားလုပျပေးရမယျ့ တာဝနျရှိပါတယျ။ လုပျသမြှသငျခနျးစာ၊ လှုပျရှားမှုတိုငျးကိုလညျး စိတျဝငျစားဖှယျ၊ ပြျောရှငျဖှယျဖွဈအောငျ လုပျပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျ့ဆီက ဘာသာစကားအတှကျ အားတကျသရော စိတျပါဝငျစားမှုကို သငျ့ကလေးက အတုယူပွီး အတတျသငျမှာမို့လို့ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဆံကေသာနဲ့ အသားအရေ အထူးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းကောင်းတွေ
Next articleဗိုက်အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး အမြန်ဆုံးဗိုက်ချပ်စေမဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ဖျော်ရည်အချို့
အိမ်ထောင်ကျခါစ သားဦးကလေးမွေးမည့် မိခင်များ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ
Family February 10, 2019
ကလေးရှိတဲ့ မိဘတိုင်း နားလည်နိုင်တဲ့ နံနက်ခင်းအခြေအနေများ
Family February 8, 2019
ပျော်ရွင်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ ကလေးဘဝမှာ သင်ပေးထားရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှု (၁၀)ခု